Etu esi agbanwe aha njirimara na Instagram | Gam akporosis
Enwere ndị ọrụ afọ gara aga mepụtara akaụntụ ha na Instagram. N'ọnọdụ dị otú a, ọ ga-ekwe omume na aha njirimara ha nwere na netwọkụ mmekọrịta ewu ewu abụghị nke kachasị amasị ha. Ya mere, enwere ike ịnwe ụfọdụ ndị ọrụ chọrọ inwe ike ịgbanwe aha a. Mana ha amaghi ma odi nfe ma obu uzo aga enweta nka na ntinye aka. N'ụzọ dị mwute, maka ndị chọrọ, ọ ga-ekwe omume ịgbanwe aha a.
Eziokwu bụ na usoro ị ga - agbaso dị mfe. Yabụ mgbe oge chọrọ ịgbanwe aha profaịlụ a, ọ naghị eweta ọtụtụ nsogbu. N'adịghị ka ụfọdụ usoro na Instagram, na nke a ọ ga-ekwe omume ịgbanwe aha njirimara ma na ngwa na gam akporo dị ka na ihe nchọgharị.
Ihe kpatara ya n'echiche a bụ na ịkwesighi ịnweta nhazi nke netwọk mmekọrịta maka nke a. Mana ha ga-eji ọrụ ọzọ, Gini bu profaịlụ. Yabụ ọ bụ ihe ị nwere ike ịnweta na ụdị niile nke Instagram. N'ihi ya, ọ dị ezigbo mma maka ndị ọrụ, ndị nwere ike ime ya n'oge ọ bụla. Na nke a, a na-egosi usoro ndị ahụ na ngwa gam akporo, nke a na-ejikarị eme ihe.
Mana ọ bụrụ na ejiri ụdị ihe nchọgharị nke netwọkụ mmekọrịta, nzọụkwụ iji soro bụ otu. Ya mere, onye ọ bụla chọrọ nwere ike ịgbanwe aha njirimara ha ma ọ bụrụ na ha echee na nke ha nwere adịghị mma. Bụ ihe nwere ike ime ọ bụrụ na azọrọ aha njirimara ma mkpebi ahụ ka emechara gbanwee ya.
Ikwesiri imeghe ngwa Instagram na gam akporo ekwentị. Mgbe ị banyelarị n'ime ya, usoro ọzọ bụ ịga profaịlụ onye ọrụ ahụ. Ya mere, anyị pịa akara ngosi dị na ala nke ihuenyo ahụ, nke ga-enye anyị ohere ịnweta profaịlụ anyị na ngwa ahụ. N'ime profaịlụ, anyị ga-ele anya maka nhọrọ iji dezie profaịlụ.
Ọ bụ ọrụ anyị na-ahụ n'okpuru ọnụọgụ ndị na-eso ụzọ na post nke anyị bulitere na netwọkụ mmekọrịta. Mgbe ahụ, anyị pịa nhọrọ a, nke mere na ọ na-akpọrọ anyị na ihuenyo ọhụrụ. Na windo a, anyị nwere ọtụtụ nhọrọ nke anyị nwere ike idezi profaịlụ anyị na-amasị anyị. Nke a bụ ebe anyị ga-ahụ na enwere ngalaba dịnụ a na-akpọ Aha ojii. Ọ bụ nke ahụ masịrị anyị.
Ná nkebi a anyị ga- tinye aha njirimara anyi choro iji ugbu a na Instagram. O nwere ike ịbụ onye anyị chọrọ, ọ bụrụhaala na ọ nweghị onye ọzọ nwere ya na ngwa a ma ama. Ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu, anyị ga-enweta ozi na-ekwu na anyị enweghị ike iji aha njirimara ahụ kwuru na ya. Ya mere, ọ bụghị ihe ga-enye anyị nsogbu n'akụkụ a. Ya mere, anyi webatara aha a.
Mgbe anyị họrọworị ma tinye aha ahụ, anyị ga-pịa ịchekwa. Mgbanwe ahụ ga-adị ire ugbu a, agbanyeghị na enwere ike ịnwe ikpe ebe ọ ga - ewe nkeji ole ma ole iji mechaa. N'ụzọ dị otú a, ndị ọrụ ga-enwe ike gbanwee mgbe ọ bụla ịchọrọ aha njirimara na Instagram, dị ka ị pụrụ ịhụ n'ụzọ dị mfe n'ezie. Na ngwa ahụ enweghị ịgba otu ugboro aha aha a ga-agbanwe. Ọ bụ ezie na ezigbo mma bụ ịnwe naanị otu, na anyị agaghị agbanwe agbanwe. Karịsịa n'ihe banyere ndị ọrụ nwere ahia ahia ma obu a akaụntụ kwupụtara. Ma usoro dị mfe ma ọ bụ otu ihe ahụ. Ọ bụrụ na ị jiri ụdị ihe nchọgharị ahụ, ị ​​ga-eme otu ihe ahụ dị ka nke a, na-enweghị ọdịiche ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Otu esi agbanwe aha njirimara na Instagram